Tungamira ndege kubva kuNur-Sultan kuenda kuLondon Heathrow dzokerazve paAir Astana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Tungamira ndege kubva kuNur-Sultan kuenda kuLondon Heathrow dzokerazve paAir Astana
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kazakhstan Breaking News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege dzichafambiswa nendege dzichangoburwa dzeAirbus A321LR, nguva yekufamba iri maawa manomwe nemaminetsi gumi nemashanu ichibuda kuenda kuLondon nemaawa matanhatu nemaminetsi makumi matatu pakudzoka kuNur-Sultan.
Air Astana inotangazve ndege kubva kuKazakhstan kuenda kuUK.
Air Astana inoshanda Airbus A321LR munzira yeLondon.
Nzira yeLondon ichashanda neMugovera neChitatu.
Air Astana inotangazve nendege yakananga kubva kuguta guru reKazakhstan Nur-Sultan kuenda kuLondon Heathrow musi wa18 Gunyana 2021, kutanga iine mafambiro maviri pavhiki Mugovera neChitatu.
Vapfuuri vanoenda kuKazakhstan vanofanirwa kuratidza yakaipa COVID-19 bvunzo yakatorwa maawa makumi manomwe nemaviri vasati vapinda munyika.
Nursultan Nazarbayev International Airport inhandare yenyika yose muAkmola Region, Kazakhstan. Ndiwo wekutanga nhandare yendege inoshandira Nur-Sultan, guta guru reKazakhstan.
Heathrow Airport, yakatanga kunzi London Airport kusvika muna 1966 uye yava kunzi London Heathrow, inhandare huru yepasi rose muLondon, England. Ndiyo imwe yenhandare nhanhatu dzenyika dzinoshandira dunhu reLondon. Nzvimbo yeairport ndeyayo uye inoshandiswa neHeathrow Airport Holdings.